Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » NASA kpọpụtara mmadụ iri ọhụrụ astronauts
NASA ahọpụtala ndị ga-azọ mbara igwe ọhụrụ iri sitere na mpaghara nke ihe karịrị 10 na-achọ ka ha nọchite anya United States ma rụọ ọrụ maka ọdịmma mmadụ na mbara igwe.
Onye nchịkwa NASA Bill Nelson webatara ndị otu klas astronaut 2021, klas ọhụrụ mbụ n'ime afọ anọ, n'oge mmemme Dec. 6 na Ellington Field dị nso na Johnson Space Center nke NASA na Houston.
Ndị na-aga ime mbara igwe ga-akọ maka ọrụ na Johnson na Jenụwarị 2022 iji malite ọzụzụ afọ abụọ. Ọzụzụ ndị ndoro-ndoro anya nke mbara igwe dabara n'ụdị ise dị mkpa: ịrụ ọrụ na idowe sistemu mgbagwoju anya nke ọdụ ụgbọ elu International, ọzụzụ maka ịgagharị mbara igwe, ịzụlite nkà rọbatik dị mgbagwoju anya, ịrụ ụgbọ elu ọzụzụ T-38 n'enweghị nsogbu na nka asụsụ Russian.
Mgbe emechara, enwere ike kenye ha ọrụ ndị gụnyere ịme nyocha n'ime ọdụ ụgbọ elu ahụ, ịmalite site na ala America n'ụgbọelu nke ụlọ ọrụ azụmahịa wuru, yana ozi miri emi gaa ebe ebe gụnyere ọnwa na ụgbọ elu Orion nke NASA na rọketi Sistemụ Mwepụta Oghere.
Ndị tinyere akwụkwọ gụnyere ụmụ amaala US sitere na steeti 50 niile, District nke Columbia, na ókèala US Puerto Rico, Guam, Virgin Islands, na Northern Mariana Islands. Na nke mbụ, NASA chọrọ ka ndị na-aga ime nweta akara ugo mmụta nna ukwu na ngalaba STEM ma jiri ngwá ọrụ nyocha n'ịntanetị. Ụmụ nwanyị na ndị nwoke ahọpụtara maka klas ndị na-enyocha mbara igwe ọhụrụ na-anọchite anya ụdị dị iche iche nke America na ụzọ ọrụ nke nwere ike iduga n'ọnọdu na ndị na-enyocha mbara igwe nke America.
Ndị na-azọ elu igwe 2021 bụ:
Nicole Ayers, 32, isi, US Air Force, bụ nwa afọ nke Colorado onye gụsịrị akwụkwọ na US Air Force Academy na Colorado Springs, Colorado, na 2011 na a nzere bachelọ na mgbakọ na mwepụ na obere na Russian. O mechara nweta nzere masta na computational wee tinye mgbakọ na mwepụ na mahadum Rice. Ayers bụ onye ụgbọ elu ọgụ nwere ahụmahụ nwere ihe karịrị awa ọgụ 200 na ihe karịrị awa 1,150 nke ngụkọta oge ụgbọ elu na T-38 na F-22 Raptor jet. Otu n'ime ụmụ nwanyị ole na ole na-efe efe F-22 ugbu a, na 2019 Ayers duziri nwanyị mbụ niile nke ụgbọ elu na ọgụ.
Marcos Berríos, 37, isi, US Air Force, tolitere na Guaynabo, Puerto Rico. Mgbe ọ bụ onye nchekwa na nchekwa mba ikuku, Berríos rụrụ ọrụ dị ka onye injinia ikuku maka US Army Aviation Development Directorate na Moffett Federal Airfield na California. Ọ bụ onye na-anya ụgbọ elu nke nwetara nzere bachelọ na injinịa injinia sitere na Massachusetts Institute of Technology na nzere masta na injinia yana doctorate na ụgbọ elu na mbara igwe na Mahadum Stanford. Onye ọkwọ ụgbọ elu a ma ama, Berríos achịkọtala ihe karịrị ọrụ ọgụ 110 na oge ụgbọ elu 1,300 n'ime ụgbọ elu 21 dị iche iche.
Christina Birch. Mgbe ọ nwetasịrị akara mmụta doctorate na injinia bayoloji site na MIT, ọ kuziri bioengineering na Mahadum California, Riverside, na ide na nzikọrịta ozi sayensị na California Institute of Technology. Ọ ghọrọ onye na-agba ígwè egwu egwu na otu mba US.
Deniz Burnham, 36, lieutenant, US Navy, na-akpọ ụlọ Wasilla, Alaska. Onye bụbu onye nkuzi na NASA's Ames Research Center na Silicon Valley, California, Burnham na-eje ozi na nchekwa ndị agha mmiri US. O nwetara nzere bachelọ na injinịa kemịkalụ na Mahadum California, San Diego, wee nweta nzere masta na injinia na Mahadum Southern California dị na Los Angeles. Burnham bụ onye ndu nwere ahụmahụ na ụlọ ọrụ ike, na-ahụ maka ọrụ ịkụ ala na mpaghara North America, gụnyere na Alaska, Canada na Texas.
Luke Delaney, 42, isi, lara ezumike nka, US Marine Corps, tolitere na Debary, Florida. O nwetara nzere na injinia injinia na Mahadum North Florida na nzere masta na injinia ikuku site na Naval Postgraduate School. Ọ bụ onye ọkwọ ụgbọ mmiri ama ama nke sonyere na mmega ahụ na mpaghara Eshia Pasifik niile wee rụọ ọrụ ọgụ na nkwado nke Operation Enduring Freedom. Dị ka onye na-anya ụgbọ elu ule, o mere ọtụtụ ụgbọ elu na-enyocha njikọ nke usoro ngwá agha, ma jee ozi dị ka onye nkuzi ụgbọ elu ule. Delaney rụrụ ọrụ na nso nso a dị ka onye na-anya nyocha na NASA's Langley Research Center, na Hampton, Virginia, ebe ọ kwadoro ọrụ sayensị ikuku. Gụnyere ọrụ NASA ya, Delaney abanyela ihe karịrị awa ụgbọ elu 3,700 n'ụdị jet, propeller na ụgbọ elu rotary 48.
Andre Douglas, 35, bụ onye Virginia. O nwetara nzere bachelọ na injinia injinia site na US Coast Guard Academy, nzere masta na injinia injinia na Mahadum Michigan, nzere masta na ọdụ ụgbọ mmiri na injinia mmiri na Mahadum Michigan, nzere masta na injinịa eletriki na kọmpụta. sitere na Mahadum Johns Hopkins, yana doctorate na injinia sistemu sitere na Mahadum George Washington. Douglas jere ozi na US Coast Guard dị ka onye na-ese ụkpụrụ ụgbọ mmiri, injinia mgbapụta, onye na-ahụ maka njikwa mmebi, na onye isi oche. N'oge na-adịbeghị anya, ọ bụ onye ọrụ dị elu na Mahadum Johns Hopkins Applied Physics Lab, na-arụ ọrụ na robotics mmiri mmiri, nchekwa mbara ala, na ọrụ nyocha oghere maka NASA.
Jack Hathaway, 39, ọchịagha, ndị agha mmiri US, bụ onye Connecticut. O nwetara nzere bachelọ na physics na akụkọ ihe mere eme site na US Naval Academy wee gụchaa akwụkwọ na Mahadum Cranfield dị na England na US Naval War College. Onye na-anya ụgbọ mmiri ama ama, Hathaway fepụrụ wee bute ya na Navy's Strike Fighter Squadron 14 n'ime USS Nimitz na Strike Fighter Squadron 136 n'ime USS Truman. Ọ gụsịrị akwụkwọ na Empire Test Pilots' School, na-akwado ndị Joint Chiefs of Staff na Pentagon, na nso nso a kenyere ya dị ka onye ọrụ nchịkwa maka Strike Fighter Squadron 81. O nwere ihe karịrị 2,500 awa ụgbọ elu na 30 ụdị ụgbọ elu, karịa karịa. Ndị na-ebu ụgbọ 500 ejidere ọdịda, ma fega njem ọgụ 39.
Anil Menon, 45, lieutenant colonel, US Air Force, mụrụ na zụlitere na Minneapolis, Minnesota. Ọ bụ dọkịta na-awa ụgbọ elu mbụ nke SpaceX, na-enyere aka ịmalite mmadụ mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ na mbara igwe n'oge ọrụ NASA's SpaceX Demo-2 na iwu ụlọ ọrụ ahụike iji kwado usoro mmadụ n'oge ọrụ n'ọdịnihu. Tupu nke ahụ, ọ jere ozi NASA dị ka dọkịta na-awa ụgbọ elu maka njem dị iche iche na-ebuga ndị na-agụ kpakpando na ọdụ ụgbọ elu International. Menon bụ onye dibịa bekee na-arụsi ọrụ ike nke nwere ọzụzụ mkpakọrịta n'ime ọzara na ọgwụ ikuku. Dịka dọkịta, ọ bụ onye nzaghachi mbụ n'oge ala ọma jijiji nke 2010 na Haiti, 2015 ala ọma jijiji na Nepal, na 2011 Reno Air Show mberede. Na Air Force, Menon kwadoro 45th Space Wing dị ka dọkịta na-awa ụgbọ elu na 173rd Fighter Wing, ebe ọ banyere ihe karịrị 100 ụdị na F-15 fighter jet ma buru ihe karịrị 100 ndị ọrịa dị ka akụkụ nke nlekọta ahụike dị egwu.
Christopher williams, 38, tolitere na Potomac, Maryland. Ọ gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Stanford na 2005 na nzere bachelọ na physics na doctorate na physics sitere na MIT na 2012, ebe nyocha ya bụ na astrophysics. Williams bụ onye ọkà mmụta sayensị ahụike kwadoro, na-emecha ọzụzụ obibi ya na Harvard Medical School tupu ịbanye na ngalaba ahụ dị ka ọkà mmụta sayensị na onye nyocha. Ọ rụrụ ọrụ na nso nso a dị ka ọkà mmụta sayensị ahụike na ngalaba Radiation Oncology na Brigham na Hospitallọ Ọgwụ ụmụ nwanyị na Dana-Farber Cancer Institute na Boston. Ọ bụ onye ndu physics maka mmemme ọgwụgwọ radieshon na-eduzi MRI nke Institute. Nchọpụta ya lekwasịrị anya n'ịzụlite usoro nduzi onyonyo maka ọgwụgwọ ọrịa kansa.
Jessica Wittner. O nwetara nzere bachelọ nke sayensị na injinia ikuku sitere na Mahadum Arizona, yana Master of Science na injin ikuku sitere na US Naval Postgraduate School. Enyere Wittner ọrụ dị ka onye ọrụ ụgbọ mmiri site na mmemme onye ọrụ na-arụ ọrụ wee rụọ ọrụ ụgbọ elu F/A-38 na-efe efe na Strike Fighter Squadron 18 na Virginia Beach, Virginia na Strike Fighter Squadron 34 na Lemoore, California. Onye gụsịrị akwụkwọ na US Naval Test Pilot School, ọ rụkwara ọrụ dị ka onye na-anya ụgbọelu na onye ọrụ ọrụ na Air Test and Evaluation Squadron 151 na China Lake, California.
Na mgbakwunye na ndị otu iri a nke klaasị astronaut 10, NASA ahọrọla ndị na-agụ kpakpando 2021 kemgbe Mercury asaa mbụ na 360.